Cagaaran, qalabyada kala duwan ee qalabkayaga | Warka Gadget
Cagaaran, qalabyada kala duwan ee qalabkayaga
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Gargaarka, qalabka
At Actualidad Gadget waxaan sii wadeynaa inaan sameyno waxa aan jecelnahay, isku day qalabka iyo qalabyada ka dibna kaaga sheekeeyo waaya aragnimadayada. Ma ahan markii ugu horeysay ee saaxiibada Ugreen waayo aragnimadayada ayay ku kalsoon yihiin. Taasi waa sababta aan maanta uga hadlayno baakidh yar oo alaabta Ugreen ah.
Gaar ahaan, waxaa jira afar qalab oo aan kaala hadli doono. Aad ayey uga duwan yihiin midba midka kale, laakiin marka lagu daro saxiixa soo saaraha, waxay leeyihiin wax ay wadaagaan. Dhammaan waxay ahaayeen uuraysatay noloshu noo fududayso, oo aad caawiso in aaladahayada elegtarooniga ah ay sii balaariyaan suurta galkooda haddii ay suurtagal tahay.
1 Afar Alaabta Cagaaran ee Baahiyaha Kala Duwan
2 Ugreen HiTune X5 sameecadaha
3 Adabtarka Bluetooth ee Nintendo Switch
4 Kiniin hayaha
5 USB C multi-dekedood
Afar Alaabta Cagaaran ee Baahiyaha Kala Duwan
Waxaan leenahay qaar auriculares Qalabka wireless-ka ee TWS, HiTune X5. A adabtarada USB-C multiport oo leh fursado kala duwan .. Adabtarka gudbinta by Bluetooth ka Nintendo Switch. Ugu dambayntiina, a miiska miiska u taagan kiniinka.
Ugreen HiTune X5 sameecadaha
uu taleefoonnada ugu "sare" ee Ugreen iyo muuqaalkeeda, iyo waayo-aragnimada isticmaalka, ayaa xaqiijinaya tan. Iskusoo wada duuboo, waxay ku dhufteen muuqaalkooda jireed. Qaabka ay leeyihiin maaha mid la mid ah nooc kasta oo kale. Taasina waxay dad badan u tahay war wanaagsan. Waxaan aragnay oo aan tijaabinay noocyo badan oo taleefoonnada dhegaha la gashado, mararka qaarkoodna khaladaad naqshadeed oo halis ah ayaa la sameeyaa si ay u “kala duwanaadaan”.
ka Cagaaran X5 waxay tusaale u yihiin naqshadda asalka ah ama ka duwan. Inkasta oo dhadhanka, midabada ayaa muujinaya muuqaal la soocay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qaabab wareegsan iyo Cawl loo doortay dhismaheeda. Dhab ahaantii, qalabka wax soo saarka ee la doortay iyo dhammayn midabka dhalaalaya wuxuu ka dhigayaa inay u muuqdaan kuwo aad qaali u ah.
Kiiska dallacaadda ayaa sidoo kale laga dhisay walxo balaastiig ah oo leh dhalaal dhalaalaya. leh saddex LED xagga hore ee ay noo soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan xaaladda kharashka baytari. Oo leh a saldhig magnetic halkaas oo taleefoonnada dhegaha la gashado ay si fiican ugu habboon yihiin in la isu soo dhoweeyo.
ka xakamaynta fiisigiska dhegaha-dhegaha ayaa ah taabasho leh. Waxaan xakameyn karnaa dib-u-ciyaarista maqalka annagoo marinnada hore ama gadaal u gudbinayna. Hakad o ciyaar heeso. Ka jawaab ama diid wicitaanada, iyo xitaa u yeer codkeena caawiyaha. Dhammaan iyada oo loo marayo soo noqnoqoshada furayaasha ama "taabashada", ama iyada oo loo marayo maraakiib dhaadheer.
Ugreen X5 taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah ayaa na siinaya a ismaamul ilaa 28 saacadood mahadsanid kiiskeeda dacwadeed. Waxayna awood u leeyihiin hawlgal aan kala go' lahayn ilaa 7 saacadood oo isku xigta. In ka badan oo ku filan inaadan ka welwelin batterigaaga maalmo badan oo la isticmaalo.
Halkan ka iibso sameecadahaaga Ugreen HiTune X5 on Amazon.
Adabtarka Bluetooth ee Nintendo Switch
Magaceedu meelna ugama tagin shaki ku saabsan shaqada qalabkan. Sida aan bilowgiiba idiin sheegnay, hadafka Ugreen waxaa ka mid ah balaadhi fursadaha qalabkeena elegtaroonig ah Way caddahay in lagu xisaabtamo Isku xirka bluetooth ee ku yaala Nintendo Switch ka dhigaysa mid ka sii fiican.
Nashqaddeeda jireed iyo qaabka ay leedahay ayaa si buuxda ugu xidhan midka fiidyowga-console laftiisa. Oo sida la filayo. Tani waxay ku haboonaan doontaa si fiican caqabadna kuma noqon doonto isticmaalkeeda saxda ah. Shaki la'aan qalab in waxay u muuqan doontaa inay tahay qayb ka mid ah qalabka laftiisa.
Waad ku mahadsan tahay adabtarada Bluetooth 5.0 by Ugreen Waxaan ugu dambeyntii ku isticmaali karnaa taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah ee Nintendo Switch ugu cadcad. Si fudud ugu xidh oo ku raaxayso waayo-aragnimo ciyaaraha wireless. Isaga oo 120 mAh baytariga waxaad heli doontaa wax badan oo aad ku ciyaarto ilaa lix saacadood oo joogto ah.
Kaliya shid isla marka ay ku xidho nintendo-gaaga oo ku xidh taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah interface-kiisa isla markaaba. Marka la isku xidho, xidhiidhka had iyo jeer si toos ah ayaa loo samayn doonaa. Waxay leedahay suurtogalnimada in isku mar la isku xidho laba taleefoonnada gacanta, haddii ay dhacdo inaad la wadaagto ciyaarta. Waxaana leenahay masaafo dhan ilaa 10 mitir.
Sida aan arki karno, qalab buuxinaya shuruudihii aan sheegnay in Ugreen la soo jeediyay. Qalabkan yar ayaa sameeya Beddelkayaga ayaa ku guulaysta isku xidhka oo bixi khibrad isticmaale oo raaxo leh oo ugu dambeyntii aad u fiican oo dhammaystiran.
Soo qaado adabtaradaada Bluetooth-ka Nintendo Switch on Amazon
Qalab kale oo aan awoodnay inaan isku dayno ayaa ah Kaniiniga cagaarka ah. Qalab aad uga gaabiyay in uu suuqa iska yagleelo oo si la yaab leh u yimi wax ka dambayso kaniiniyada laftooda. Xaaladdan oo kale, taageero in Waxaan si dhab ah u isticmaali karnaa nooc kasta oo kiniin ah iyo inay si ammaan ah oo adag ugu hayn doonto meel siman.
U hay taageero kaniiniyadayada waxay ka dhigtaa isticmaalkeeda mid raaxo leh. Gaar ahaan marka aan u isticmaalno tablet-ka si aan u isticmaalno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan waqtiyada aynaan u baahnayn in aan qorno ama la falgalno iyaga. Taageero miiska saaran marka aan shaqaynayno, ama miiska jikada si aad isugu daydo in aad samayso cuntada YouTube.
Ugreen waxa kale oo ay leedahay qayb ka mid ah buugaagtiisa oo u go'ay in lagu taageero tablets iyo mobaylada. Iyo kan aan nasiib u yeelanay inaan tijaabino waa tan ugu raaxada badan in la qaado maadaama ay si fiican u laabi karto. Dabcan, sidoo kale raaxo leh in la helo taageero la isku halayn karo mar kasta oo la isticmaalo.
Lagu sameeyay balaastig ah Iyada oo xadhiga lagu dhammeeyo alaabta macdan, waxay bixisaa sawir aad u xirfad leh. shabka laablaabashada waa mid fudud isla markaana waxtar leh oo aan hagaajin karno dhererka iyo u janjeersiga si isticmaalkeedu uu u noqdo mid raaxo leh marka la fadhiyo ama taagan yahay, tusaale ahaan.
Iibso Amazon on Taageerada Tablet/mobile on Amazon
USB C multi-dekedood
Iyo qalabkii ugu dambeeyay ee aanu kuu soo bandhigno waxay noqdeen a muhiim ah, dhankasta loogu talagalay isticmaaleyaasha kumbuyuutarka MacBookga. The isku xirnaan xumo, con maqnaanshaha dhammaystiran ee dekedaha, kuwaas oo bixiya noocyada kala duwan ee laptops Apple. Xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin oo kaliya isku xiraha USB Type-C oo keliya. Waxaana lagama maarmaan ah in la helo qalab noocan oo kale ah si uu awood ugu yeesho in uu isku xidho durugsan.
Yaa aan u baahnayn inuu ku xidho ugu yaraan hal xusuusta USB wakhti kasta? Waa hagaag, waxaa suurtogal ah in la'aanteed qalabkan aan la xiriiri karin sinaba. Taasi waa sababta xiriiriyaha noocan ahi uu aad muhiim ugu yahay, gaar ahaan kuwa isticmaala qalabkan. Shaki la'aan, shay lagama maarmaan ah si loo awoodo in la isticmaalo "caadi" isticmaalka kombuyuutarka. Ugreen waxay noo keentaa isku xidhaha isku xidhka badan ee awooda inuu ku dhufto fursadaha kombiyuutarkaaga.
Gaar ahaan, iyada oo la socota isku xirka Ugreen multiport, waxaanu haynaa saddex USB USB dekedaha, deked HDMI iyo labo ka mid ah boorar dhankeeda ilaa akhri kaararka xusuusta. Inkasta oo aanu seegnay dekedda USB C tan iyo la'aanteed ma awoodno inaan isticmaalno isku-xiraha oo aan ku dallaacno batteriga isku mar.
Halkan waxaad ka iibsan kartaa 6-in-1 USB C Hub on Amazon
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Cagaaran, qalabyada kala duwan ee qalabkayaga
Tronsmart Studio Wireless Speaker, falanqaynta iyo waxqabadka